Ny Firafitr’ilay Horohorontany Tao Trinidad · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2018 7:50 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, русский, Ελληνικά, Français, English
Tadidiko mazava tsara ny horohorontany tao Haiti tamin'ny taona 2010. Tsy tany ny tenako tamin'io, saingy tena niaina tao anatin'izany, an'eritreritra sy tao am-po. Namoaka lahatsoratra efa ho 50 isa ny ekipan'ny Global Voices ao Karaiba mikasika ireo ezaka famonjena, fanavotana ary fanarenana nandritra an'ireo roa volana nanaraka ny 12 Janoary, ary nanana tarika iray izahay teny an-kianja, nandritra ny fotoana fohy tamin'ireo dingana fanarenana voalohany, mba hanampiana an'ireo mpanao aterineto Haisiana, izay voafetra ny fahazoana herinaratra sy aterineto, tamin'ny fizaràna an'ireo fijeriny manokana mikasika ilay loza nahatsiravina.
Niteraka vokatra mahatsiravina ilay horohorontany tao Haïti, amin'ny maridrefy mahatalanjona 7.0: naharitra 30 hatramin'ny 40 segondra teo ilay izy, sahala amin'ireny zazakely mifanintona ireny ary mandrotika tanteraka ny tanàna kilalao Lego natsangany. Mampitampim-bava ny fitambaran'ny isan'ireo tradoza sy ny fatiantoka ara-toekarena izay efa nanano-sarotra tsy hay zakaina ho an'ilay firenena nosy. Na lavitra aza, nanova ahy io horohorontany io: nanamafy ny tanjak'ireo vovonana median'olontsotra izy io mba hiresahana amin'ny anaran'ireo olona any amin'ny faritra tratry ny loza voajanahary (sy ady), raha toa ireo media mahazatra tsy afaka akory mahita ny faritra azo antoka ho aleha. Tranga mety hiverimberina izy io, hatramin'ny fiandohan'ny Lohataona Arabo vao tamin'ity taona ity, hatramin'ny krizy misy ao Siria. Saingy nanamafy ihany koa tao an-tsaiko io tranga io hoe mpiambina ny rahalahintsika isika. Vondrom-piarahamonina manerantany. Ho any aho, saingy noho ny famindrampon'Andriamanitra.
.Ny 21 Aogositra 2018, miaraka amin'ny sisa rehetra tao Trinité-sy-Tobago, tany aho. Ny horohorontany, manana maridrefy 7,3 tao amin'ny ivony tao avaratr'i Venezoela, dia 6,9 tamin'ny fotoana izay niantefàny taminay tao Trinidad. Tamin'ny 5ora 31 mn hariva tao an-toerana, niasa tamin'ny solosainako aho, niandry izay fotoana hahatongavan'ny vadiko tao an-trano. Tokony naka ny zanako lahy izy, izay tany an-tranon'ny namany. Raha vao nanomboka ny hovitrovitra, tsy dia mbola nanahy loatra aho. Manaraka ny tandavan'ny triatra nateraky ny horohorontany no misy ny nosinay, efa zatra niaina tanaty horohorontany matetika izany izahay ary malefadefaka hatrany izy ireo amin'ny ankapobeny sady fohy ny faharetany. Noho izany, nataoko izay tokony nataoko toy ny mahazatra, izay ihany. “Oh”, hoy aho niteny irery, “horohorontany izany. Ndeha ho jerena izay nitranga.”
Tao anatin'ny segondra vitsy monja, niha-nahery ny hovitrovitra. Tampoka teo nifanatrika tamina liona iray tezitra mafy mierongerona eo ambony bozaka aho, rindrina mihovitrovitra miaraka amin'ny akony. Nitsangana teo ambony sezako aho, nijery teny ambaravarankely: nikorontana avokoa ny faritra rehetra manodidina ahy, tena nahery be ilay izy. Tsy toy ilay horohorontany re amin'ny fitotoambary. Nataoko izay mbola tsy nataoko. Nivoaka ny tranoko aho. Tamin'ny fotoana nankanesako tao amin'ny trano fandraisambahiny, nahatsapa ho sahala amin'ireny teo afovoan'ny tarika mpanao Karnivalin'ny Talata Matavy ireny aho, mozika mandeha mafy mivoaka avy amin'ireo fanamafisampeo ary mampihovitrovitra izay manodidina azy: boum, boum! mihetsika ny tany, mandihy manaraka ilay gadona masiaka dia masiaka “dutty wine”, tahaka izay nolazain'ny namana iray, toy ny tsy hitsahatra.
Stratejika be ilay hevitro nandeha nihazakazaka tany ivelany: raha vao nanomboka nisy zavatra nirodana, tsy te-ho voafandrika ao aho. Fara-faharatsiny, eny amin'ny toerana malalaka aho afaka mahita izay loza mety mirodana, sady… eny… miala an'io. Fa tao antokontaniko, voahodidina hazona kakao sy ireo hazona ‘pouis’ ary ‘majestika’ tsy mety maty iray, nahatsapa ny tenako ho tony hafahafa izany aho teo anivon'ilay korontana ary tsy mbola nijoro ohatran'izay hatramin'izay. Tsy midika akory izany hoe tsy nangataka tamin'Andriamanitra aho ny mba hampitsahàrana azy io. (Ny tena izy, mety ho ireo no tena teniko marina.) Saingy raha toa nisy ny zavatra marina tamin'io fotoana io, dia izahay rehetra nifandray avokoa. Niha-nanjavona ireo fisarahana ho roa: hatramin'ireo vorona tao anaty hazo ka hatramin'ireo jiolahy eny andalambe, mitovy avokoa izahay rehetra. Sahala amin'ny tsy misy dikany ireo zavatra afaka manasaraka anay raha oharina amin'ny fisarahan'ireo takelaka tektonika.
Niantso ny vadiko tamin'ny 5:33 hariva, tamin'ny fotoana indrindra izay nampisy an'ireo horohorontany. Najanoko tao an-trano ny telefoniko. Tsy noeritreretiko mihitsy ny hitondra azy hanaraka ahy, ary mbola tsy tao an-tsaina koa ny haka sary an'ireo tranga rehetra sahala amin'izay nataon'ireo mpampiasa media sosialy, saingy tamin'ny minitra nilàzany tamiko fa mbola ao amin'ny biraony izy, nivoaka ny varavarana aho ary tao anaty fiara hiomana haka ny zanako lahy. Tapaka ny jiro, nanondrana ny fifandraisana finday ary tsy afaka nankeny amin'ny tranon'ilay naman-janako aho mba hahafantarana izay nataon'izy ireo. Foana tsy toy ny mahazatra ny arabe sady mangina. Toy ny gaga ny olona, afa-tsy mpividy iray teo amin'ny toeram-pivarotana indroa miantaona izay anatin'ny fampisehoany tanteraka, mampiseho amin'ilay mpivarotra ny fomba nampihovitrovitan'ilay horohorontany azy. Nahavita nitsiky aho. Mbola mahita hatsikana hatrany ireo Trinibagoniàna ao anaty alahelo. Izany no nosedrainay.
Teny andalana niverina, intelo angamba aho no nijanona mba hiresaka tamin'ireo manodidina. Ny findaiko, izay efa nanomboka ho lany fahana, dia mbola nandray an'ireo hafatra tsy ankijanona nalefan'ireo namana sy fianakaviana, ireo akaiky na lavitra, mba te-hahalala hoe manao ahoana izahay aty ary dia toy izany koa aho. Teo am-pipetrahana tao anaty hazavàna mitsilopilopin'ny tolakandro, tonga saina aho hoe tena mba tsara vintana izahay fa na dia nitranga aza ny fianjeran'ireo korontana sy ireo fitaratra vaky, tsy nisy aina nafoy, tsapako fa marina ny voalazan'ilay poety Trinidadiàna iray, Shivanee Ramlochan, niteny hoe: “Molo-bilany iray mihodidina isika eto.”